FILA BRASILEIRO DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Fila Brasileiro Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Buffy the Fila at 1½ sano jir - milkiilihiisa ayaa leh, `` Isagu waa wax walba oo aan halkan ka aqriyey oo ku saabsan Filas. Wuxuu gabi ahaanba jecel yahay caruurtayda iyo xitaa in yar oo ka mid ah asxaabtooda. Laakiin kaliya asxaabta ku hareeraysan ka hor inta uusan gaarin qiyaastii 8 bilood. Miisaankiisu waa ilaa 170 rodol. waana midab midab leh. Isagu waa eeyga ilaaliyaha ugu dambeeya. Dad aad u tiro yar ayaa u soo dhowaada gurigeenna. Wuxuu jecel yahay inuu seexdo guriga, laakiin waxaan ku qasbanaanay inaan banaanka ku xirno maxaa yeelay wuxuu si daran u khuuraa. Xitaa caruurta dabaqa kore ma aysan seexan karin asaga oo hurda hoosta. '
Liiska eeyaha Fila Brasileiro Mix Breed
Mastiff reer Brazil
Molosser reer Brazil
Fila si fiican ayaa loo gubay oo qaab dhismeed qaabaysan leh. Aabihiis 'Bloodhound' ayaa ka muuqda muuska dheer, maqaarka qaldan, iyo awooda raadinta heer sare. Afkeeda ayaa ku culus culeyska bushimaha kore ee qalinku siinayo muuqaal Mastiff ah. Qoortiisu waa mid aad u dhumuc weyn, oo leh dharab. Maqaarku waa astaamaha ugu caansan. Way qaro weyn tahay oo dabacsan tahay jirka oo dhan, ugu horreyn qoorta, sameysmaysa dharab, iyo in shaqsiyaad badan laalaabku u sii gudbaan laabta iyo caloosha. Eeyaha qaarkood waxay muujiyaan laab laab madaxa madaxa iyo waliba engega oo ku soo dhacaya garbaha. Koodhku waa gaaban yahay, siman yahay, cufan yahay oo jilicsan. Noocani wuxuu noqon karaa midab kasta, adag ama gogol, marka laga reebo caddaan, jiirka cawlan, la xoqay, la duubay, ama madow iyo tan. Midabada caadiga ah waa fawn, black iyo brindle. Brindles oo ah midab aasaasi ah waxay yeelan karaan karbaashyo ka yar ama leh xoog aad u xoog badan. Maaskaro madow ayaa laga yaabaa ama laga yaabaa in aan la joogin. Dhammaan midabada la oggol yahay calaamadaha cad waa in lagu xaddido cagaha, xabadka iyo caarada dabada. Calaamadaha cad cad lagama rabo qayb kale oo jirka ka mid ah. Dhabarka ayaa xoog leh oo toosan u kacaya si tartiib tartiib ah xagga dambe. Socodkeeda waa la cabiraa oo wuu jilicsan yahay, sida kan bisadda oo kale. Dabeecaddiisa ugu weyni waa xawaaraha (socodka geela), marka hore laba lugood oo dhinac dhinac loo dhaqaajinayo, oo ay ku xigto labada lugood ee dhinaca kale, taas oo keenaysa dhaqdhaqaaq dhinaca dambe ah oo ku wareegaya laabta iyo gadaasha dambe oo culeyskiisu saaran yahay dabada markii la kiciyo. Inta lagu jiro socodka wuxuu hayaa madaxa ka hooseeya khadka dambe. Gawaarida xiisaha leh waxay ku kasbatay guul weyn ee bandhigyada eyga. Muuqaalka Guud: Waa wax caadi ah molossoid ku dhashaan qaab dhismeedka lafaha oo xoog badan, shaxan afargeesle ah iyo iswaafajsan, laakiin iswaafajsan oo isu dhigma. Ku dariskiisa weynaantiisa, firfircoonaan weyn ayaa si fudud loo arki karaa. Dumarku waa inay muujiyaan naagnimo si fiican loo qeexay, taas oo ka duwan iyaga isla markiiba ragga.
Fila Brasileiro waa geesinimo, mastiff xoog leh. Waa lagu aamini karaa qoyskeeda aadanaha, sameynta wehel daacad ah oo jacayl leh. Si aad ah ugu heellan milkiilihiisa. Fila A ayaa kaa ilaalin doona adiga oo aan daqiiqad ka laba labayn. Wuxuu dareemayaa inay tahay sababta uu halkaas u joogo. Markaad xiriir la yeelato Filaaga, adiga iyo qoyskaaguba waxaad noqon doontaan adduunkiisa oo dhan. Ma barinaysid Filagaaga inuu ku difaaco, maadaama isagu kaligiis sidan ku sameeyo. Waa nooca dabeecadda inuu daacad u ahaado oo uu ilaaliyo qoyskiisa. Waxay jecel yihiin carruurta qoyskooda ku nool waxayna ka qaadaan xadgudub badan. Weydii qof kasta oo carruur leh iyo Filas oo waxay kuu sheegi doonaan sida aan macquul ahayn ee ay ugu jilicsan yihiin carruurta qoyska. Filas waxay samaystaan ​​xayawaan gurijoog ah oo wanaagsan waana kuwo jilicsan, jecel, daacad ah aadna u ilaaliya. Waxay sidoo kale la xiriiri doonaan kuwa kale xayawaanka guryaha lagu haysto gurigaaga. Geesinimo, go'aan qaadasho iyo geesinimo heer sare ah ayaa ka mid ah astaamahiisa. Waa qof dabacsan oo adeeca milkiiladiisa iyo qoyskiisa isla markaana aad ugu dulqaad badan carruurta qoyskiisa ah. Aaminnimadiisu waxay noqotay maahmaah reer Brazil ah. Wuxuu had iyo jeer raadiyaa shirkadda sayidkiisa. Wuxuu muujiyaa dabeecad dagan, isku kalsooni iyo isku kalsooni, oo uusan ku dhibsan dhawaaqyada qalaad ama markuu wajahayo jawi cusub. Waa ilaaliye hantiyeed oo aan la dhaafi karin, isaguna wuxuu u janjeedha, dabiici ahaan, inuu ugaarsado ugaarsiga weyn iyo lo'da. Filasyada qaarkood way liqi karaan, gaar ahaan ka dib markay wax cabbeen. Geesinimada iyo feejignaanta shisheeyaha, noocani wuxuu sameeyaa eey ilaalin oo cajiib ah. Waxay u baahan tahay a milkiilaha xukuma yaa fahmaya alif pack dareen . Ku habboon is dhexgalka bulshada iyo fahamka dareen abuur waa furayaasha lahaansho guul leh ee Fila ah. Ha u oggolaan in noocani ay la wareegaan. Wuxuu ubaahan yahay ilaaliye muujinaya awooda dabiiciga ah. Noqo mid adag, kalsooni leh oo iswaafaqsan. Milkiilayaasha dadban ayaa la kulmi doona arrimaha saldanadda . Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Adiga oo ah Bini-aadamka WAA INAAD uga saraysaa si ka sareysa eyga. Ey leh cabir iyo xoog baaxad leh oo Fila ah oo aaminsan inuu alfa u yahay bini-aadamka waa khatar aad u xun.
Dad badan oo Fila fannaaniin ah ayaa ku talinaya in la joojiyo dhammaan bulsheynta da'da 4 bilood. Markay cunsuriyada eyda cuncunteedu joogsato da 'yarta waxay dabeecaddeeda u yeelaysaa eey bulshada ka soo horjeedda. Tani waa himilada ugu dambeysa ee milkiileyaal badan oo Fila ah maaddaama ay tahay astaanta astaamaha, si loo yiraahdo. Waa waxa loogu yeero '' Ojeriza 'shisheeyaha,' oo macnaheedu yahay kalsooni darrada shisheeyaha. Dad badan oo milkiileyaal ah, si kastaba ha noqotee, waxay doorteen inay bulshada dhexgalaan Fila inta ay nool yihiin. Bulsheynta Fila Brasileiro sida eey marwalba kama dhigi doonto Filaaga sida dadka oo kale. Waxa ay sameyn doonto ayaa ah inaad muujiso Filaaga in wax walba aysan khatar aheyn. Waxay ka dhigi doontaa mid kalsooni badan oo xasilloon adduunka ku hareeraysan. Robin Barrett, milkiilaha Harley Acre Filas, 'Markii ugu horreysay ee aan Filas soo galo, milkiilayaasha badankood waxay doorteen in Fila Brasileiro ay noqdaan kuwa aan lakalaheyn oo asal ahaan kaxun dhamaadka dhamaadka xarka. Dadka qaarkiis waxay umuuqdaan inay u baahanyihiin eey cabsi galiya dhamaadka xarigga ama gadaasha xeyndaabka si ay u dareemaan inay ka sarreeyaan. Fila A ma ahan inuu sidaa noqdo si uu adiga kuu difaaco. Caqli wanaagsan iyo tababar addeecid waxaad kuheleysaa Fila dhinacaaga ah oo iskiis u dhaqmi doona inta uu joogo dadweynaha oo aan rabin inuu dilo wax kasta oo dhaqaaqa. Markaad dhexgeliso Filagaaga oo aad u soo bandhigto adduunka ku hareeraysan waxaad sameyneysaa wax la mid ah oo loo baahan yahay si Fila loo galiyo giraanta showga. '
Fila MA AHA nooc ka mid ah celceliska milkiilaha xayawaanka. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa Fila Brasileiro ku saabsan yahay iyo waxa loo baahan yahay si loo yeesho mid. Haddii aad dooratid inaad kor u qaaddo Filagaaga adoo adeegsanaya qaababka soo saara eey ah 'Ojeriza' dadka shisheeyaha ah (kalsooni darro), waa inaad go'aansataa haddii qaab nololeedkaagu kuu oggolaan doono nooc ilaalin ah oo lidi ku ah bulshada iyo shisheeyaha oo aad go'aansato haddii aad leedahay awood u lahaanshaha eyga. Haddii aad leedahay asxaab iyo ehel badan oo gurigaaga ka soo galaya ama ka baxaya waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso nooc kale. Waxaad sidoo kale u baahan tahay xayndaab adag oo wanaagsan oo dherer sax ah leh qufulo aamin ah si shisheeyaha looga ilaaliyo banaanka iyo Fila-ga.
Dhererka: 25.5 - 29.5 inji (65 - 75 cm)
Miisaanka: 90 - 110 rodol (41 - 50 kg)
U nugul cudurrada noocyada waaweyn. Iska jir sinta dysplasia. Maaddaama eydaasi u nugul yihiin buurbuur, waxay quudiyaan laba ama saddex cunto yar maalintii, halkii ay ka siin lahaayeen mid weyn. Sidoo kale u nugul cudurka CHD, xuubka caloosha, xusulka dysplasia iyo PRA.
Noocani kuma haboona nolosha magaalada, maxaa yeelay jirkeeda xoogga leh waa inuu ka shaqeeyaa tamarta xorriyadda dalka. Waxay u baahan tahay daarad deyr leh oo leh qol ay maamusho. Filadu waxay ku seexan kartaa banaanka iyadoo leh hoy habboon.
Filadu waxay u baahan tahay fursad badan oo jimicsi ah. In kastoo qaarkood u muuqan karaan kuwo caajis badan, baradho sariir weyn, sida eeyaha oo dhan, waa in lagu qaataa socod maalinle ah .
Qiyaastii 9-11 sano
Qiyaastii 4 ilaa 10 eey
Fila Brasileiro wuxuu ku abtirsadaa qarnigii 15aad Ingriis Mastiff, Bloodhound, Bulldog iyo Rafeiros. Dhiig-baxa, wuxuu ka dhaxlay maqaarka dabacsan iyo dareenkiisa urta urta. Dhiig-qulqulka 'bloodhound' ee khadadka dhiigiisa wuxuu siinayaa awooddiisa dabagal heer sare Mastiff wuxuu ku darey jirkiisa is haysta, geesinimo iyo dabeecad feejignaan weligeed ah. Markuu Fila helo dhagaxiisa ma weerarayo, laakiin wuxuu ku hayaa meel u dhow ilaa ugaarsade yimaado. Bulldog waxay ku dartay dabeecad dabacsanaan la'aan ah. Filadu waxay awood u leedahay daba-galka, xaynta iyo xakamaynta xoolaha iyo ugaadha waaweyn. Markii addoonsigu sharci ka ahaa Brazil, Fila waxaa loo isticmaali jiray in lagu celiyo dadka baxsadka ah ee aan waxyeello gaadhin sayidyadoodii addoommada ahaa. Awoodda raadinta weyn ee Fila ayaa horseeday joogitaankeeda Waqooyiga Ameerika iyo Yurub. Cabirkeeda iyo suurtagalnimada gardarrada awgeed, waxaa si aan caddaalad ahayn looga mamnuucay dalalka qaarkood.
CAFIB = Naadiga horumarinta Fila Brasileiro
Lahaanshaha sawirka Harley Acre Rows
Fila Brasileiro eey yar oo ku nasanaya dhabta, sawirka waxaa iska leh Harley Acre Filas
Genevieve iyo gacaliyaheeda Hayden
Bandhigga Poco da Onca
Tani waa Tobi qiyaastii 9 toddobaad. Muxuu yahay arday caan ah!
Uma the Fila Brasileiro at 1 sano jir— 'Uma waa xishood badan tahay oo ciyaar badan. Waxay aad ula saaxiibtaa shisheeyaha markay guriga joogaan. '
João Ridgley ee Eshabeta II ee Fila Brasileiro eey ah oo 8 toddobaad jir ah, waxaa iska leh: La Nita Holder
Eeg tusaalayaal badan oo Fila Brasileiro ah
Sawirada Fila Brasileiro 1
Sawirada Fila Brasileiro 2
sawirada qof reer irish ah
maxay cunaan turkiga xayawaanku
eyda eyda oo ka bilaabanaya x